I-Twitter isivele isivumela ukuthi senze kusebenze imodi yasebusuku kunguqulo yewebhu | Izindaba zamagajethi
I-Twitter isivele isivumela ukuthi sisebenzise imodi yasebusuku kunguqulo yewebhu
Imodi yasebusuku ibilokhu ingenye yezinketho ezifunwa kakhulu yibo bonke abasebenzisi bamapulatifomu weselula, umsebenzi ofanele lapho sisebenzisa izinhlelo zokusebenza ngokukhanya okuncane noma okungenakho nhlobo. Abathuthukisi beSoftware, abanjengoGoogle neApple babonakala benqikaza ukunikela ngale modi ngokwendabuko neminye imisebenzi isunguliwe, njengomsebenzi weNight Shift esimweni se-iOS, umsebenzi ofaka isibuko ngentando. Ngenhlanhla kukhona ezinye izinhlelo zokusebenza ezihlangabezana nezifiso zabasebenzisi futhi zisivumela ukuthi senze kusebenze imodi yasebusuku eyenza ukufunda kube lula kakhulu ezimeni zokukhanya okuphansi. I-Twitter isanda kujoyina i-bandwagon, kepha kulokhu ngewebhusayithi yayo.
Impela iningi lenu alisebenzisi iselula yakho ukusebenzisa okuqukethwe, noma ngabe iningi lenu, kodwa futhi nisebenzisa ikhompyutha. Kulokhu, kunamakhasi wewebhu ambalwa kakhulu nezinhlelo zokusebenza ezisekela le modi, okuyi ukuvimbela amehlo ethu ukuthi angakhathali ngokushesha okukhulu kunokuthi sikwenze ngokukhanya okuzungezile.
Ekuzimiseleni kwayo ukuzama ukuheha abasebenzisi abasha, iwebhu ye-tweeting usanda kuthola ngokusemthethweni ukuthi kungenzeka ukuthi wenze lo msebenzi usebenze, ukuze kungasadingeki sisebenzise izandiso ukunika amandla le modi kuwebhusayithi ye-Twitter.
Ungayisebenzisa kanjani imodi yasebusuku kuwebhusayithi ye-Twitter
Inqubo ilula kakhulu futhi ayidingi ukuthi sifake amamenyu wokumisa ayinkimbinkimbi, kwesinye isikhathi, ukuze siyisebenzise, ​​kufanele uchofoze kumsebenzisi wethu osengxenyeni engaphezulu kwesokudla kwesikrini futhi kumenyu yokudonsela phansi khetha Imodi yasebusuku. Ngemuva kwalokho umbala omnyama uzoguqulwa umhlophe, ukhombise imibhalo emhlophe futhi ingemuva kumnyama.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Amanethiwekhi omphakathi » I-Twitter isivele isivumela ukuthi sisebenzise imodi yasebusuku kunguqulo yewebhu
Siphanga ithebhulethi ye-Elements Terra 7 QCI
I-Google isondela ekuthatheni ukwahlukaniswa kweselula kwe-HTC